Kuhle ikhondomu. Kusho inzalo yesimanje
Phakathi ukuhlukahluka okukhulu emakethe ekhemisi lanamuhla ukukhetha inzalo kuba inselele impela. Ake sithole ukuthi kwakungani kunjalo, kudingeka wazi zonke omdala (futhi ngezinye izikhathi asakhula) ukuze ukhethe ikhondomu engcono.
Ingabe ikhona okukhethayo?
Wonke umuntu ocansini, kungakhathaliseki ubulili, okungenani kanye ezimpilweni zabo esimweni, lapho ubuso fantastic kakhulu ebusuku, kodwa phambi kwayo ukuxazulula inkinga enzima inzalo. Kumelwe siqiniseke ngokuphelele baqiniseke ukuthi baphephile siqu, kodwa abazi ukuthi yini ikhondomu ukukhetha? Yikuphi brand ukunikeza okuthandayo njengoba ukukhetha uhlobo ezifanele kakhulu?
Ngakho, lapha wena emi amafasitela ezitolo usokhemisi futhi ukulahlekelwa yini sizihlole zonke lokhu kwehlukahlukana. Yini edala ngakho amakhondomu amaningi?! Kumane umthondo esikhundleni rocket isikhala! Ngakho engikudingayo: super-slim futhi super-ezinzima, ukuma yokwakheka noma oversized, ribbed noma nezinduna, noma ngisho ne amadevu, esobala noma omnyama, bakhazimula ebumnyameni futhi nephunga elimnandi lama-banana noma strawberry, ne abicah noma nge amafutha elwa namagciwane noma mhlawumbe Long lava? Kanjani ukuqonda lapha? It is okulinga ubambe lokuqala iyatholakala futhi egijima. Ngakho, yini okudingeka ukwazi ukukhetha ikhondomu kwesokudla iyona engcono kakhulu?
Into yokuqala efika emqondweni - yebo, ekhemisi. Kodwa Pore, umuthi udinga ngokushesha, ekhemisi ukubaleka, nobusuku bonke emgwaqeni ... Futhi thina siye endaweni eseduze lula kwesibaya ekhoneni. Khumbula, ungalokothi ungakwenzi! Ngoba, okokuqala, izinga kushiya okuningi okufanele oyifunayo, njengoba ngempela futhi okunezinhlobonhlobo eboniswe izimbali. Ngaphezu kwalokho, izimo isitoreji futhi eshalofini yokuphila zindawo, ngokuvamile, kungukuthi ihlonishwe. Ngakho uma bayayazisa impilo yakho, kungcono uthenge izinto zokuvimbela inzalo kwenye indawo.
Ngokushesha ofika esitolo eliseduze nawe, elibonisa lonke emashalofini ngesikhathi checkout. Lapha ungakwazi ukufunda uhla atholakalayo amahora. Kodwa kungani?! Uma ungakwazi ukuya noma yikuphi esitolo ezikhethekile inthanethi futhi ngokufunda ngaphambilini lonke ulwazi izinqumo. Kodwa isikhathi kwezidingo, maye, kuyoba eside. Ngakho-ke kuhle kakhulu ukuba uwuthenge amakhondomu ekhemisi - ke kuqinisekisa ikhwalithi ye umenzi (hhayi inkohliso) nokulandela izimo futhi eshalofini yokuphila. Nakuba yekhwalithi ephansi amakhondomu zingathengwa lapha, kodwa kuyodingeka kunembeza wakho, ngakho musa skimp on mayelana nokuphepha kwabo.
Yiluphi uhlobo ukukhetha?
Konke kuncike kuphela umcabango kanye izintandokazi zakho. Okokuqala, bheka ukuthi ubukhulu. By the way, khumbula ukuthi XXL-zokuvimbela inzalo - lena ngaphezulu umkhiqizi Stunt emphakathini, kunokuba isidingo sangempela umthengi. Ziyakwazi kunangendlela indinganiso kuphela ambalwa amamilimitha angu. Ukuze-95% amadoda amakhondomu abavamile kakhulu. By endleleni, uma unquma ukuthenga umkhiqizo oversized kuphela ukuze ukubukisa phambi intokazi, alungele ezingalindelekile - kungase lushelele ngesikhathi esingafanele. Uma lena inkinga yakho main lapha ilula - uthenga isikhumba-Friend, ukuze ikhondomu ayizange ubohle.
Ngakho, ubukhulu emthumeni, bese lokho? Ngokuqondene nesimo sendawo ebusweni, kuyindaba of ukunambitheka. Futhi akusiyo ukunambitheka yakho, futhi intombazane yakho, ngoba ungumuntu umehluko namanje engazizwa.
Uma ubufuna ehlukahlukene yokuphila ubulili, zama uzizamele umbala, nephunga (hhayi ukunambitheka - lezi azenzeki!) Noma izinto zokuvimbela inzalo elikhanyayo.
Elinye iphuzu elibalulekile - lena impahla kanye nohlobo Lubrication. Kukhona amacala lapho oyedwa ine ukusabela iguliswa latex. Kulokhu, kukhona okukhulu okunye - polyurethane noma polyisoprene amakhondomu. Njengoba uhlobo amafutha, futhi kungaba ezahlukene. Kwenqwaba kwekhondomu kuyinto igrisi abicah. Njengengxenye yalo ngokuvamile (ngaphandle izinketho eshibhe) zihlanganisa nonoxynol-9 - ikhemikhali ivikela ezifweni ezithathelwana ngobulili futhi ukunciphisa umsebenzi isidoda uma kwenzeka umonakalo ngephutha ukuze ikhondomu. Futhi konke kuhle, kodwa, ngeshwa, ngokuvamile kubangelwa nonoxynol dysbiosis emomozini e abesifazane, kanye nokuthuthukiswa thrush.
An ibhonasi wanezela iyona igrisi ekhethekile, ngelula isenzo socansi (okubizwa ngokuthi Long Love amakhondomu).
Cabanga ngalo mbuzo kabanzi. Kuye ngabe ufuna wokuqala nomkhulu kunabo bonke ukujabulisa intombazane wakho noma uthole yona, ibe khona ehlukile futhi ekhethiwe ikhondomu.
Uma usuvele unayo i-abakhiqizi ozithandayo, wena lula kakhulu. Futhi uma hhayi? Khumbula ukuthi sha ethandwa kakhudlwana, ayanda izinga lomkhiqizo, kodwa intengo, mhlawumbe, futhi.
Umqhele Amakhondomu (ezweni lendabuko - Japan) athandwa kakhulu kokubili amadoda nabesifazane ngenxa ubuhlakani babo, futhi, ngokufanelekile, ukukhanya kanye emizweni zemvelo.
Amakhondomu "Durex" - umholi esasiwafanele phakathi kwazo zonke abakhiqizi, okuyinto bafinyelela isibalo ohlwini akuyona onyakeni wokuqala. Futhi sijabulele lesi enkazimulweni bona kufanele - okunokwethenjelwa futhi mncane, njengoba kufanele kube.
Amakhondomu zokuphila ukukhiqiza imodeli ezithakazelisayo ukuphila kube mnandi kuphela anabamemezeli L-arginine. Le asidi acid kwandisa kwezocansi, ukuqhanyelwa lobukhali bobabili abangane bomshado, okuyinto kakhulu kuthuthukisa izinga coitus.
Amakhondomu Contex abathandwa kokubili amadoda nabesifazane ukuze linokwethenjelwa nenala amafutha, okwenza ukusondelana lemvelo kanye ngokunethezeka. Ngaphezu kwalokho, amakhondomu lo mugqa presents ezihlukahlukene izinhlobo (impumuzo, okugcotshwayo umbala, ukunambitheka kanye nokunye. D.).
Ososayensi emazweni onke ngokuphindiwe olwenziwa ucwaningo lwabo uzama ukukhetha ikhondomu engcono. Manje kwangena izintatheli kanye Blogger. Futhi ngalokho abakutholile?
Eqolo, njengoba umthetho, kukhona amakhondomu, "Durex", futhi izindleko kakhulu (ngaphakathi isizathu futhi ngaphandle nokulahlekelwa izinga) - "Isudi".
amakhondomu isikhathi eside kakhulu - Izitayela Life par Vizit, futhi Sico (amanothi) - lo okungenani isikhathi eside futhi ngokuvamile begijima.
Enokwethenjelwa kakhulu ngokuya Ukuvikelwa ezifweni ezithathelwana ngobulili, nokukhulelwa okungafunwa baba Contex amakhondomu.
Indlela ukukhetha uhlobo olufanele umkhiqizo?
Super-mncane - lezi amakhondomu cishe hhayi wazizwa phakathi ukuhlangana futhi mahle abathandi mizwa yosizi evamile kakhulu.
Relief - kukhona 2 izinhlobo: nge oqoshiwe ngaphakathi noma ngaphandle. Ngakho, ukumthokoza. Basuke babekholelwa ukuthuthukisa ikhwalithi sobuhlobo bobulili, kodwa izibalo zibonisa ukuthi ekhethekile awukho umphumela.
Enongiwe - yakhelwe ukuthethelela ubulili obenziwa ngomlomo, kodwa, ngokuphambene nenkolelo evamile, akudingeki ukunambitheka.
Coloured futhi elikhazimulayo - kodwa nje intsha etotosa!
Amakhondomu ngaphandle lubrikanta- kwabesifazane abanothando kakhulu nge ngokweqile siqu Lubrication yawo engokwemvelo.
Desensitizing amakhondomu (nge izinzwa) - isikhathi socansi.
amakhondomu Okwangempela (Kuvunguza ngesimo dolphin, njll) - zidalwe kuphela ngenjongo ngokuqola imali abathengi zabangenacala.
Vibroprezervativy - ikhondomu bephethe Silicon isixwayisi indandatho. A-experiment omkhulu, kodwa kuyodingeka ukucinga (ngokuvamile bonke okufanayo ubulili-izitolo noma kuyi-Internet).
ongakhetha amaningi kakhulu, noma Eyes ukusebenzisa!
Namanje awukwazi sithole choice? Khona-ke nje sizame konke! Kodwa khumbula ukuthi ukuphepha - wokuqala nomkhulu kunabo bonke! Ngakho-ke kungcono uhlale brand owaziwa. Kodwa amakhondomu engaziwa Izibuyekezo mayelana nokuthi iziphi izinhlelo uthola kwi-Internet - hhayi ukhetho best. Ezimweni eziningi, lokhu uthenge umbono, iqiniso.
Ngakho, oyikhethile ikhondomu engcono ngiyajabula ngoba abantu belwa! Kodwa ungakhohlwa izimiso ezimbalwa ezilula:
Ungalokothi ulondoloze amakhondomu esikhwameni sakho bese egumbini igilavu imoto yakho - bengakuthandi ukushisa. Ake okungcono basesimweni nightstand.
Amakhondomu yisikhathi, kumele ilahlwe, kodwa akasebenzisanga - ngisho noma kungekho imali entsha futhi bawadinga ngokuphuthumayo kakhulu, kanye nezinye cha. Awukwazi - inkathi.
Ngo ukusetshenziswa kwekhondomu latex akuvunyelwe nhlobo ukusebenzisa zokugcoba uwoyela ezisekelwe ezengeziwe (Vaseline, massage amafutha , njll).
Condom emaphaketheni kufanele uvule izingalo, kodwa hhayi amazinyo noma ezinye izinto ezicijile.
Ikhondomu kufanele sibe yimani niqonde ngokugcwele umthondo.
Amakhondomu, okuyinto Izibuyekezo azizinhle, kungcono ungayisebenzisi, ngakho-ke akuveli ayakuzonda wabelane ngolwazi nomunye ezikhaleni Internet kanye zokuxhumana bukhoma.
Beka ikhondomu ngomlomo kuphela uma olunephunga elimnandi. Ngakolunye nje ogulayo.
Endabeni ka umonakalo ikhondomu ubuqotho ngempela zisebenzisa postcoital zokuvimbela inzalo ( "postinor" noma analogs yalo), kanye imithi elwa namagciwane wendawo (isb, "Miramistin").
Musa bachithe ikhondomu elisetshenziswa ethoyilethi! Lahla ngokuphelele ngokusebenzisa dumpster.
Kule minyaka eyishumi uhla amakhondomu kwelulwe kakhulu futhi uyaqhubeka ukuthuthukisa. Ungesabi ukuba ulinge bese ubheka okuhle kakhulu kuwe.
Futhi okubaluleke - ungakhohlwa mayelana nokuphepha, futhi ujabulele nomunye!
Ngobani gay futhi basuka kuphi?
"Korvaltab": yokusetshenziswa, ngempela